Hsubuu | First Myanmar Loyalty Program
သင်ရရှိထားသော Points, Stamps, Luckydraw များကြည့်ရန်။
Member Card နဲ့ Phone Number ချိတ်ဆတ်ရန်
Link With Phone Number and Member Card
ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိရုံဖြင့် Points, Stamps, Luckydraw အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ပြီ။
Mobile App ရယူရန်။
Digital Stamp Reward System
စက္ကူကတ်တွေအစား HsuBuu ရဲ့ Stamp Reward System ကိုသုံးပြီး digital stamps တွေစုမယ်။ လက်ဆောင်တွေလဲကြမယ်။
သုံးသလောက် ငွေတွေကို Points အဖြစ်ပြန်စုပြီး လက်ဆောင်တွေနဲ့ လဲကြမယ်။
ဈေးဝယ်ရင်း ကံစမ်းကြမယ်။ ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်တွေကိုလည်း သိမ်းစရာမလိုဘဲ digital ticket နဲ့ပဲ စုထားနိုင်ပြီး ကံစမ်းမဲ ပေါက်/မပေါက်ကိုလည်း တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ပြီး ရင်ခုန်နိုင်ပြီနော်။
Member Card System
သင့်ရဲ့ VIP customer တွေအတွက် Member Card Design ကို စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပြီး HsuBuu ရဲ့ smart technology နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ All in one member card.
Mobile Apps မိတ်ဆက်
Why choose HsuBuu for your shop?
သမရိုးကျ လုပ်ဆောင်မှုတွေက သင့်ကို ကုန်ကျမှု များစေပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျော့ချပြီး ခေတ်မှီနည်းပညာဖြင့်
Loyalty Program ဆိုတာ အလွယ်ကူဆုံး၊အရိုးရှင်းဆုံးနည်းပညာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်နဲ့သင့် Customer တွေကို ရင်းနှီးမှုပိုရစေပါတယ်......
သင်ရလိုက်တဲ့ Benefit နဲ့ သင်သုံးလိုက်ရတဲ့ Cost တန်စေရမယ်...
HsuBuu Mobile App ကို အသုံးပြုသော သူငယ်ချင်းများအတွက် အလွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းသောပုံစံနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်
1. HsuBuu ဆိုတာဘာလဲ
HsuBuu ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ အသုံးစရိတ်ကနေ Points လေးတွေ လက်ဆောင်ပြန်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး၊ အဲဒီ Points လေးတွေကို တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေနဲ့ ပြန်လည်လဲယူနိုင်တဲ့ Mobile App လေးဖြစ်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီ Points တွေနဲ့ပဲ လက်ဆောင်တွေအပြင် အမျိုးမျိုးသော အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း သူငယ်ချင်းတို့ရရှိစေမှာပါ၊
2. Points တွေက ဝယ်ရမှာလား
Points တွေကိုဝယ်စရာမလိုပါဘူး၊ Register နဲ့ Share with Facebook ပြုလုပ်ရင်းနဲ့လည်း Point တွေရယူနိုင်သလို HsuBuu Mobile App မှာ ပါဝင်ထားသောဆိုင်များရဲ့ ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း Points တွေကို စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့ ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကနေလည်း Points တွေကို ရရှိစေမှာပါ၊ ( ဥပမာ။ ။ bnfexpress.com မှကားလက်မှတ်များ၊ Coffee Mix ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ HsuBuu points system ပါရှိသော အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားမဆို )
3. HsuBuu Loyalty Program ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ
HsuBuu ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးတွေက မိမိတွင်ရှိနေသော Point များကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပြန်လည် လဲလှယ်ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ။ ။ ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်များ၊ အဝေးပြေးကားလက်မှတ်များ၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်လက်မှတ်များ၊ အလှပြင်ဆိုင်တွင် အသုံးပြုခွင့် နှင့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် အစားအစာများသုံးစွဲခွင့် များကိုပြန်လည်လဲလှယ် ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
4. အဆင်မပြေလို့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ
Register ပြုလုပ်ချိန်တွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားသိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်ဖြစ်စေ၊ အကြံဉာဏ်များပေးလို သည် ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hsubuu loyalty program ရဲ့ Call Center Phone Number များဖြစ်သော 09 2600 56001 ~2သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ HsuBuu နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့HsuBuu website ဖြစ်တဲ့ www.hsubuu.com ကို လည်းဝင်ရောက်လေ့ လာလို့ရပါတယ်။
HsuBuu Points များနှင့် လက်ဆောင်များက သူငယ်ချင်းတွေအတွက် စောင့်ကြိုနေပါပြီးနော်!
အခုပဲ Mobile App ကို ရယူလိုက်ပါ
All Rights Reserved 2020 © HsuBuu Designed & Developed by hsubuu.com